Muxuu Ka Dhahay Mareeykanka Xaalada Dalka Suudaan? -
HomeWararkaMuxuu Ka Dhahay Mareeykanka Xaalada Dalka Suudaan?
Muxuu Ka Dhahay Mareeykanka Xaalada Dalka Suudaan?
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Maraykanka ayaa ku dhawaaqday in ay taageerayso in Suudaan ay gasho xilli kala guur ah oo shacabku uu majaraha u hayo, waxayna intaas ku dartay in ay waajib tahay in ay arrintaasi ka soo hormarto labada sano ee milatarigu qabtay.
Ma uusan caddayn in Maraykanku uu u arko in afgambi milatari looga tuuray xukunka Cumar Xasan Al Bashiir iyo in kale iyo sidoo kale in Maraykanku uu sidii madaxweyne ku meelgaar ah ula dhaqmi doono Awad Ibn Ouf.
Wuxuu sheegay in arrintu aysan wali saldhigan, Wasaaradda Arrimaha Dibadduna ay qiimaynteeda dhabta ah samayn doonto marka xaqiiqadu caddaato.
Wuxuu sidoo kale sheegay in Maraykanku uu hakiyay waxa loogu yeero “wajiga labaad” ee shirkii ay la gali lahaayeen dawladda Suudaan, balse ay sii wadi doonaa xiriirada kale “ee sida macnaha leh horumarka looga samayn karo masaaliixda labo geesoodka ah”.
Kulanka “Wajiga Labaad” waxyaabaha looga hadlayo waxaa ka mid ahaa in dib u habayn ay ka dhacdo Suudaan si ay arrintaas gacan uga gaysato in Maraykanku uu ka saaro dalalka argagixisada taageera.